Lalàna an-dranomasina any UAE | Firenena misahana ny lalàna an-dranomasina any UAE
Ny lalàna an-dranomasina any UAE
Fitsipika momba ny indostria an-dranomasina UAE
Lalàna vaovao an-dranomasina any UAE
Ny lalàna an-dranomasina any UAE, amin'ny ankapobeny, dia faritry ny lalàna be pitsiny indrindra. Ny rafitra ara-dalàna no mifehy ny fivezivezin'ny sambo, tantsambo, ary ny sambo rehetra toy izany izay ampiasaina eny ambonin'ny rano.
Ny kaonty sy ny varotra an-dranomasina dia mitaky ampaham-bola marobe amin'ny raharaham-barotra lehibe rehetra manerantany. Ary any amin'ny Emira Arabo Mitambatra, zava-dehibe ny hetsika fanafarana sy fanondranana. Araka izany dia manana ny seranan-tsambo be atao indrindra eran-tany izy io. Ny UAE dia miorina amin'ny faritra iray any Moyen Orient izay manana fifamoivoizana an-tsambo sy mankafy ny fitaterana an-dranomasina. Izy io dia faritra iray tena lehibe ara-toekarena amin'ny fandefasana entana, varotra ary raharaha an-dranomasina.
Nandritra izay taona vitsy lasa izay, ny indostria an-dranomasina dia sahirana amin'ny sehatry ny lalàna miovaova hatrany ary noho ny fangatahana tsy mitsaha-mitombo ny serivisy fandefasana entana, dia nanamboatra sy nianatra nifanaraka tamin'ireo fanovana ireo ny indostria. Ny serivisy fandefasana entana any amin'ny faritry ny Helodrano dia miankina betsaka amin'ny lalàna an-dranomasina ao amin'io faritra io, satria manome fototra marobe amin'ny lalàna an-dranomasina ho an'ny indostria.
Na eo aza izany dia maro ny olona tsy mahalala fa ny lalàna mifehy ny hetsika mitranga eto an-tany dia tsy mitovy amin'ny lalàna mifehy ny fiainana eny ambonin'ny rano azo zahana. Ny ratra sy ny lozam-pifamoivoizana miseho amin'ny rano azo zahana dia iharan'ny lalàna hafa noho ireo nitranga teny an-tanety. Ireo lalàna mifehy ny olana amin'ny rano azo zahana dia antsoina hoe lalàna miafina na lalàna an-dranomasina.
Ary ireo lalàna an-dranomasina ireo dia misy pitsiny maro izay mety hanasarotra ny fivezivezena. Ka rehefa miasa ao amin'ny orinasan-dranomasina any UAE ianao dia mila ny fanampian'ny mpisolovava an-dranomasina za-draharaha amin'ireo olana ara-dalàna atrehin'ny orinasanao. Ao amin'ny Amal Khamis Advocates, ireo mpisolovava an-dranomasina dia manana traikefa sy fahaiza-manao hanome toro-hevitra ara-dalàna sy solontena amin'ny famahana ny olan'ny sambo an-dranomasina ary koa ny famolavolana ny fifanarahana amoron-dranomasina isan-karazany.
Inona ny ambaran'ny lalàna an-dranomasina?
Ny lalàna an-dranomasina dia lalàna manokana momba ny fandefasana sy ny fivezivezena. Izy io dia karazana lalàna sy fitsipika mifehy izay mifehy ny fifanarahana, ny torts (toy ny ratra manokana), ary ny tambin'ny onitra azon'ireo mpiasa nateraky ny ratra nahazo ny rano azo zahana.
Ny haben'ny lalàna an-dranomasina ao UAE dia mandrakotra ny fandefasana, ny fivezivezena, ny fitarihana, ny sambo fialamboly, ary ny varotra amin'ny rano, na eto an-toerana izany na any ivelany. Izy io dia mifehy ny hetsika amin'ny ranomasina voajanahary, farihy ary lalan-drano ary koa rano azo zahana olombelona toy ny lakandrano. Tompon-tsambo iray no tompon'andraikitra amin'ny ratra mahazo ny mpiasa an-dranomasina raha tsy hita maso ilay sambo na ny fitaovany ary nahatonga izany ratra izany.
Ary araka ny lalàna an-dranomasina dia manan-jo hangataka onitra ianao amin'ny ratra mahazo anao amin'ny rano azo zahana, na mpiasan-tsambo na mpandeha amin'ny sambo ianao. Afaka mahazo fahasimbana ianao ao anatin'izany ny karama very, ny vola lany amin'ny fitsaboana, ny fahasimbana amin'ny fanaintainana sy ny fijaliana, ary na ny fahasimbana ara-pientanam-po aza. Ny lalàna an-dranomasina koa dia manarona ny ratra mitranga amin'ny tany fa misy ifandraisany amin'ny asa mandeha amin'ny sambo an-dranomasina (na asa fitsangantsanganana an-tsambo).
Topimaso momba ny lalàna an-dranomasina UAE
Ny kaody maritime UAE dia lalàna mifehy ny fomba amam-panao rehetra sy ny fandefasana entana any UAE. Izy io dia fantatra ihany koa amin'ny lalàna federaly UAE No. 26 tamin'ny 1981. Nofaritana mifanaraka amin'ny lalàna maoderina an-dranomasina sy miresaka raharaham-pitsarana maro momba ny lalàna an-dranomasina UAE, ao anatin'izany ny raharaha:
Fisoratana anarana amin'ny sambo;
Antontan-taratasy momba ny sambo;
Fananana sy fampiasana sambo;
Fananan-trosa amin'ny entan'ny sambo;
Ny mombamomba ny mpitatitra;
Ny fisamborana sambo;
Ny Master sy ny mpiasan'ny sambo;
Fifanarahana fifanarahana sy fitaterana entana;
Fitetezana sy fanamoriana fiaramanidina;
Fifandonana misy sambo;
Salvage misy sambo;
Fiantohana an-dranomasina; SY
Fotoana / fetran'ny fitakiana an-dranomasina.
Mihatra amin'ireo Emirà fito rehetra ny kaody maritime. Izay tompona orinasa voarohirohy amin'ny hetsika an-dranomasina any Dubai na amin'ny faritra hafa ao UAE dia tokony hanaraka ny fepetra takian'ny lalàna amin'ny fitaterana an-dranomasina.
Ny orinasantsika mpisolovava dia mihevitra ny faritry ny lalàna an-dranomasina ho matotra. Ary ireo mpisolovavanay an-dranomasina dia afaka manome anao fampahalalana momba ny fanarahana ny lalàna momba ny dranomasina UAE. Afaka manome antsipiriany feno momba anao momba ny olana atrehin'ireo lalàna an-dranomasina ao UAE izahay.
Fitsipika momba ny indostria an-dranomasina any UAE
Ny Fehezan-dalàna an-dranomasina UAE dia misy fizarana maromaro izay manarona raharaha maro isan-karazany. Ireo raharaha ireo dia miainga amin'ny olana mifandraika amin'ny fepetra takiana amin'ny fisoratana anarana mankany amin'ny fiantohana an-dranomasina. Ireto ny sasany amin'ireo olana mety hoeritreretinao raha manana fikasana hanao zavatra mifandraika amin'ny Indostria Maritime any UAE ianao:
# 1. Fananana ny sambo ataon'ireo mpampiasa vola vahiny any Dubai
Ny vahiny izay manana orinasa any Dubai dia tokony hanaraka ny lalàna mifehy ny fananana sambo UAE. Raha vahiny ianao ary manana orinasa an-dranomasina any Dubai, dia tsy afaka misoratra anarana amin'ny sambo, sambo, sy sambo hafa ianao.
Ny hany olona mahazo misoratra anarana amin'ny sambo toy izany dia ny teratany, orinasa ary orinasa manana ny farafahakeliny 51% an'ny teratany UAE ho tompony. Raha mivarotra sambo UAE voasoratra anarana amina olona na orinasa vahiny ireo olona ireo dia hofoanana ny fisoratana anarana UAE.
# 2. Fiaran'ny entam-by amoron-dranomasina
Ny fitaterana entana amoron-dranomasina dia mitana andraikitra lehibe amin'ny toekarena UAE. Izany dia satria i UAE dia misy seranan-tsambo marobe miorina amin'ny stratejika eo amin'ny sampanan-tsambo ny faritra Azia Atsinanana sy Andrefana Andrefana.
Noho izany, zava-dehibe ny hanananao fahalalana ampy momba ny lalàna mifehy ny fitaterana entana amoron-dranomasina, satria mihatra any UAE izy ireo.
Ny fehezan-dalàna an-dranomasina UAE dia manarona ny andraikitry ny mpitatitra amin'ny fanemorana ny fandefasana entana. Mpitondra entana any amin'ny sambo an-dranomasina any UAE dia mety tompon'andraikitra amin'ny fahatarana amin'ny fanaterana ny entana any amin'ny seranan-dry zareo.
Matetika, tsy misy fatiantoka ara-batana entana rehefa misy fahatarana amin'ny fandefasana ireo entana ireo. Na izany aza, azonao atao ny manonitra noho ny fahaverezana ara-toekarena nianjady taminao noho ny fahataran'ny fanaterana entana.
# 3. Fanoratan-tsambo ireo sambo ranomasina
Ny satan'ny sambo ao UAE dia mandrakotra ny fizarana karazan-tsambo rehetra eny ambonin'ny ranomasina, ao anatin'izany ny sambo kaontenera, sambo marobe, tanker, ary na dia sambo fitsangantsanganana aza.
Ny serivisy amin'ny satan'asa dia mitantana ireo karazan-tsigala isan-karazany, ao anatin'izany ny charte de voyage, charte de temps, charte de bareboat, ary ny chart de demise.
Eo ambanin'ny satan'ny fitsangatsanganana dia manondro ny sambo ny sambo ary mandoa vola amin'ny fampiasana azy mandritra ny dia iray na indraindray. Etsy an-danin'izany, misy ny tabilao fotoana rehefa manondro ny sambo mandritra ny fotoana voafaritra ny sata mifehy.
Ary ho an'ny charte de demise, ny tompon'ny sambo dia manofa ny sambo amin'ny charterer izay manome ny ekipa, ary koa ny fivarotana sy ny bunker, ary mandoa ny vidin'ny fandidiana rehetra.
Raha mikasa ny hanao sambo fitaterana an-dranomasina any UAE ianao dia mila mamaritra hoe inona ny karazan-tsofa hampiasaina.
# 4. Ny fisamborana ireo sambo ranomasina
Tsy fahita firy ny sambon'ny ranomasina voasambotra any an-tsaha UAE Maritime. Ary amin'ny maha tompon-tsambo anao dia mety hahasosotra anao ny manelingelina ny orinasanao satria voasambotra ny sambonao.
Zava-dehibe ny manamarika fa na inona na inona lalàna mifehy ny fifanarahana, dia afaka manome fisamborana ny fitsarana UAE raha misy ny hetsika mitranga ao amin'ny UAE.
Banky na antoka ara-bola any amin'ny fitsarana no hany fanamaivanana amin'ny fisamborana any UAE.
Mifandraisa amin'ireo mpisolo vava an'i Amal Khamis hanampy anao hiaro ny asanao an-dranomasina
At Mpisolo vava Amal Khamis, manana mpisolovava an-dranomasina manam-pahaizana izahay izay mahay sy dodona hanome antoka fa hanao raharaham-barotra an-dranomasina tsy misy farany any UAE ianao.
Manana traikefa amin'ny faritra samihafa amin'ny lalàna an-dranomasina isika, ao anatin'izany:
Fanambarana ratra manokana
Fitazomana ny sambo
Ny adidy sy ny fitakian'ny tompon'ny sambo
Fiantohana loza mety hitranga ary fiantohana an-dranomasina
Fisoratana anarana, antontan-taratasy ary fananana sambo
Fifandirana amin'ny volavolan-dalàna
Fitaterana entana, mpitatitra entana ary fitaterana akora mampidi-doza
Adin'ny antoko Charter
Fotoana fitakiana an-dranomasina; ankoatry ny hafa
Ny orinasanay dia hanome solontena mifantoka, mahomby, manokana ary mahomby amin'ny fitantanana ny raharaham-pitsaranao. Amal Khamis Advocates dia orinasan-dalàm-pitaterana an-dranomasina ao Dubai izay manana traikefa amin'ny lafiny rehetra amin'ny lalàna an-dranomasina, anisan'izany ny lalàna mifehy ny varotra, ny fandefasana entana, ny fanamboarana sambo ary ny indostria any ivelany. Ekipa mpisolovava an-dranomasina natokana sy za-draharaha avy amin'ny Emira Arabo Mitambatra (UAE) izahay, izay manome serivisy ara-dalàna ho an'ny indostrian'ny fandefasana.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fandefasana an-dranomasina sy ny fifanakalozana any UAE ianao na tianao izahay hanampy anao amin'ny raharahan'ny ranomasina, Mifandraisa amin'ny mpiasan'ny lalàna ao Dubai.